कला-मनोरञ्जन Archives - ताजा समाचार
फरार भनिएकी शिल्पा रौनियारको घरमा टिका लगाउँदै गरेको भेटिइन
Posted in कला-मनोरञ्जन
ताजा समाचार । २७ असोज, काठमाडौं : पति छविराज ओझाविरुद्ध सम्बन्ध विच्छेदको मु द्दा दिएर एकाएक गायब बनेकी नायिका शिल्पा पोखरेले फोटो पत्रकार विकास रौनियारकोमा दशैंको टीका लगाएका तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक भएका तस्विरहरुमा प्रहरीको फरार अभियुक्त्तको सूचीमा रहेकी शिल्पा पोखरेलले सम्झना उप्रेती (विकास रौनियारकी श्रीमती)को हातबाट टिका लगाउँदै गरेको देख्न सकिन्छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट प क्राउ पर्नबाट बचेकी शिल्पाले यसपटक दशैं निर्देशक सम्झना उप्रेती रौनियारको घरमा मनाएकी छन् । सम्झनाका श्रीमान् फोटोग्राफर विकास रौनियारलाई शिल्पाले दाजु मान्दै आएकी छन् । सार्वजनिक भएको एक सेल्फीमा सम्झना रौनियार र शिल्पा पोखरेलको निधारमा दशैंको टीका देखिन्छ भने विकास रौनियारको निधार खाली छ । छवि र शिल्पाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा छ । दुवैलाई बहुविवाह गरेको मुद्दा परेकाले अहिले फ
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाइ फेरी अर्को बज्रपात, घरमै घट्यो नमिठो घटना
एजेन्सी । भारतीय नायक सलमान खानले होस्ट गर्दै आएको रियालिटि शो कार्यक्रम बिग बोस विवादमा परेको छ । भारतको चर्चित रियालिटी सो बिग बोसको १३ औं सिजन सुरु भएपछि विवादित भएको हो । सिजन १३ दुई साता अघिवाट सुरु भएको हो । कार्यक्रम सुरु भएपछि विवादित हुँदै आएको विषय अझै सेलाएको छैन । अब त यो कार्यक्रमको विरोधमा अभिनेता सलमान खानको घरबाहिर समेत प्रदर्शन हुन थालेको छ । सलमानको घरबाहिर भएको प्रदर्शनमा २० जनाभन्दा धेरै पक्राउ परेका छन् । यो कार्यक्रममा आपत्तिजनक दृश्य देखाइएको भन्दै सर्वसाधारण विरोधमा उत्रिएका हुन् । त्यसो त भारत सरकारले यो सोलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना पनि बढेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा देखाइएका दृश्यहरु भारतीय संस्कृतिको विरुद्धमा भएको भन्दै विरोध जनाइएको हो । भारतीय अनलाइन पोर्टल बलिउड हंगामाका अनुसार सलमान खानको घरबाहिर भएको प्रदर्शनबाट २० जना पक्राउ परेका हुन् ।
काठमाडौं – कुनै बेलाकी चर्चित अभिनेत्री नन्दिता केसी यतिबेला नेपालमा छिन् । लामो समयदेखि उनी अमेरिका बस्दै आइरहेकी छिन् । अमेरिकाको जीवनशैलीमा रमाइरहेकी नन्दिताले सामाजिक सञ्जालमा भने आफ्ना तस्वीर शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । उनले निशाना, कैफियत, सपना त्रिशुल लगायत कैयन् फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । विराज भट्टदेखि राजेश हमालसँग अनस्कृन रोमान्स गरेकी नन्दिताका फ्यान पनि उत्तिकै छन् । हालै एक अन्तर्वार्तामा नन्दिताले यो क्षेत्रमा आउँछु भनेर आफूले सोच्दै नसोचेको बताइन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनिन्, ‘फिल्ममा काम गर्ने मेरो सोचाइ नै थिएन, फिल्ममा अफर आयो, घरमा कुरा राख्दा हुन्छ भन्नुभयो, अनि खेलियो,’ उनले भनिन्, ‘केही फिल्म सफल भए, केही असफल भए, अहिले टाढा हुँदा त्यति गुनासो छैन ।’ उनले फिल्म क्षेत्रमा विना योजना आएको हुनाले टाढा हुनुपर्दा त्यतिधेरै नरमाइलो नलागे पनि कहिलेकाहीँ भने मिस
काठमाडौं। आम सर्वसाधारणलाई मात्र होइन पर्दामा देखिने कलाकारलाई पनि दशैंको रौनकले राम्रै छोपेको छ । राजधानीभन्दा बाहिर घर हुने कलाकारहरु दशैंको टिका थाप्न जन्मथलो फर्किरहेका छन् । कोही भने राजधानीमै दशैं मनाउँदैछन् । यतिबेला प्रायः कलाकारहरु किनमेलमा व्यस्त छन् । अभिनेता राजेश हमाललाई भने दशैंको छेकोमा कामको चटारो छ । एकपछि अर्को म्यूजिक भिडियोमा काम गरिरहेका छन् । फूलपातीपछि भने हमाल परिवारसँग समय विताउने सोचमा छन् । १६ वर्ष अगाडि विजयादशमीको दिन आमाको निधन भएका कारण एकादशीको दिन मात्र टीका लगाउने उनी यसपालीको दशैं धनकुटामा मनाउने योजनामा थिए । किनकि, उनी त्यहाँ एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिए । तर, पूर्वतिर निरन्तर परेको पानीका कारण कार्यक्रम स्थगित भएपछि यसपटकको दशैं पनि राजधानीमा हुने उनले बताए । मंगलबार एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो दशैंको योजनाबारे भने– ‘अन्तिम समयमा आएर दशैं यो
काठमाडौं – कुनै बेलाकी चर्चित अभिनेत्री नन्दिता केसी यतिबेला नेपालमा छिन् । लामो समयदेखि उनी अमेरिका बस्दै आइरहेकी छिन् । अमेरिकाको जीवनशैलीमा रमाइरहेकी नन्दिताले सामाजिक सञ्जालमा भने आफ्ना तस्वीर शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । उनले निशाना, कैफियत, सपना त्रिशुल लगायत कैयन् फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । विराज भट्टदेखि राजेश हमालसँग अनस्कृन रोमान्स गरेकी नन्दिताका फ्यान पनि उत्तिकै छन् । हालै एक अन्तर्वार्तामा नन्दिताले यो क्षेत्रमा आउँछु भनेर आफूले सोच्दै नसोचेको बताइन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनिन्, ‘फिल्ममा काम गर्ने मेरो सोचाइ नै थिएन, फिल्ममा अफर आयो, घरमा कुरा राख्दा हुन्छ भन्नुभयो, अनि खेलियो,’ उनले भनिन्, ‘केही फिल्म सफल भए, केही असफल भए, अहिले टाढा हुँदा त्यति गुनासो छैन ।’ उनले फिल्म क्षेत्रमा विना योजना आएको हुनाले टाढा हुनुपर्दा त्यतिधेरै नरमाइलो नलागे पनि कहिलेकाहीँ भने
राखी सावन्तले बिग बोस र सलमान खानलाई धोका दिइन्, फ्यानले यसरी रिस पोखे
मुम्बइ। बलिउडकी कन्ट्रोभर्सी क्विन भनेर चिनिने राखी सावन्त सधैं चर्चामा रहन चाहन्छिन् । उनको सामाजिक संजाल पोस्ट हेर्दा उनको चर्चाको भोक प्रस्ट हुन्छ । गोप्य व्यक्तिसँग गोप्य बिहे गरेपछि चर्चामा रहेकी राखी सावन्तका पति को हुन् भन्ने धेरैले देखेका छैनन् । फ्यानहरु उनका पतिलाई देख्न चाहन्छन् । फ्यानको यही चाहना देखेपछि राखीले बिग बोस १३ को प्रिमियरमा आफू पतिसमेत आउने बताएकी थिइन् । बिगबोसको प्रिमियर सकियो तर त्यहाँ राखी र उनका पति भने आएनन् । फ्यानले राखीका पतिलाई हेर्न कुरेर बसिरहे तर यो प्रतिक्षा त्यत्तिकै सकियो । राखीको यो झुटपछि फ्यानहरु रिसाएका छन् । उनीहरु राखीले पहिले शेयर गरेको भिडियोमा कमेन्ट गरेर रिस पोखिरहेका छन् । उनीहरुले राखीलाई झुट बोलेको भन्दै गाली गरिरहेका छन् ।
गरिमा पन्त : रिलमा शालिन, रियलमा से’क्सी !
काठमाडौं । कतिपय अभिनेत्री रिल जीवनमा से'क्सी देखिने र रियल जीवनमा सामान्य हुन्छन् । रिलमा कथाले मागेपछि दृश्य दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क रहन्छ । तर ठिक उल्टो । रिल जीवनमा शालिन देखिने अभिनेत्री गरिमा पन्त भने रियल जीवनमा ‘से'क्सी’ र विन्दाम मुडमा युरोप भ्रमणमा छिन् । बेल्जियमवासी हरि शर्मा थपलियासँग केही समयअघि विवाह गरेकी गरिमा कतै टु पिस त कतिपय ठाउँमा से'क्सी अन्दाजमा देखिने गरेकी छन् । उनले आफ्ना तस्बिर इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी थिइन् । पछिल्लो पटक चलचित्र झोलाबाट अत्याधिक चर्चामा आएकी गरिमा अब सिनेमा क्षेत्रमा फर्कन्छीन वा फर्किनन् ? त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाली फिल्मकी सुन्दर र भलाद्मी नायिकाको रुपमा चिनिने गरिमा पन्त बेल्जियम बस्न थालेको झण्डै एक बर्ष बढी भैसकेको छ । 'झोला' बाहेकका अन्य फिल्महरुले करिअर चम्काउनुको साट्टो झन फुर्सद बनाउन थालेपछि उनले बेल्जियमका ध
काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित नायिका ऐश्वर्या राय लामो समयदेखि फिल्मी क्षेत्र बाहिर छिन् । तर उनि बेला–बेला अनेक कारणबाट चर्चामा आईरहन्छीन् । हालै फ्रान्सको पेरिसमा भएको ‘फैशन वीक २०१९’ मा उनले प्रदर्शन गरेको फेसनको निकै चर्चा भएको छ । ऐश्वर्याले फेसन शोमा प्रदर्शन गरेको स्टाईलबारे धेरैले चर्चा गरेको छन् । फेसन शोमा सहभागी भएकी ऐश्वर्याको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरलसमेत भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ऐश्वर्याले समेत कतिपय फोटो शेयर गरेकी छिन् । भाइरल बनेको तस्बिरमा ऐश्वर्या पर्पल कलरको डे«समा देखिएकी छिन् । उनि तस्बिरका निकै सुन्दरी र तरुणी पनि देखिएकी छिन् । फेसन शोमा उनि आफ्नी छोरी अराध्याका साथ पुगेकी थिइन् । उनले आफ्नी छोरीलाई पनि आफ्नै कलरको ड्रेसमा सजाएकी थिइन् । अनौठो त ऐश्वर्याले हरेक इभेन्टमा सहभागी हुँदा छोरीलाई साथ छुटाउँदिनन् अनि छोरीको ड्रेस पनि आफ्नो जस्तै बनाउँछिन् ।
चलचित्र ‘क्याप्टेन’मा समावेश ‘रहर छ सँगै’ बोलको गीत सार्वजनिक भएपछि निर्देशक रामबाबु गुरुङले नायिका उपासना सिंह ठकुरीलाई ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’मा लिने मनस्थिती पक्का गरेका थिए । यो गीतमा उनको अभिनय हेरेपछि उनी पक्का थिए कि, उपासना आफ्नो कथाको पात्रमा फिट छिन् । तर, नायक दयाहाङ राई भने उपासनालाई शंकाको घेराले हेर्दै थिए । कतै उपासना आफ्नो जोडी नभएर छोरी जस्तो देखिने हुन् कि भन्ने डर दयामा थियो । तर, स्क्रिन टेष्ट गर्दा दयालाई उपासना आफ्नो जोडीमा फिट लाग्यो । पहिलो चलचित्रमा काँचो माटो देखिएकी उपासनाले दोश्रो चलचित्रसम्म आइपुग्दा आफूलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । चलचित्रले मिश्रित समिक्षा पाइरहँदा उनको प्रशंसा भैरहेको छ । कसैले उनलाई पहिलो चलचित्रमा भन्दा राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने कसैले उनलाई अबको चलचित्र क्षेत्र हाँक्ने नायिका भनेर समेत भन्न भ्याएका छन्